हिजोबाट नेपाली अनलाइनहरुमा देखिन थालेका छन्, एमाले संविधान संशोधनमा लचक हुने। यो हेडलाइन देख्दा मलाई केपी शर्मा ओलीले केही समय पहिले भन्ने गरेको गोरु नाङ्गै हिँडेको देख्दा मलाई लाज लाग्दैन भन्ने भनाइको याद आयो । उ बेला गोरु नाङ्गै हिँडेको देख्दा केपी काकालाई लाज लाग्थेन । अहिले एमाले नाङ्गो भएको देख्दा हामीलाई अनि आम जनतालाई लाज लाग्दैन किनकी उसको यो प्रवृति पुरानै हो ।
हिजोसम्म संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती, भारतीय एजेन्डा, देश विखन्डन गर्ने योजना भन्दै हिँड्ने, जनता भड्काएर सडकमा तान्डव नृत्य देखाउनेहरु आज एकाएक १८० डिग्रीको फन्की मारेर संविधान संशोधनमा लचक हुनुले एमाले यसका नेता र यसको उद्देश्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छैन र ? एमालेको असली रुप देख्न यो भन्दा बढी केही आवश्यक छ र ? आफूलाई राष्ट्रवादी र अरुलाई राष्ट्रघाती दलाल भारतीय लम्पसारवादी भन्दै सडकमा उफ्रने कार्यकर्ताका असली राष्ट्रवादी मालिकले बिराटनगरमा भारतीय राजदुत भेटेपछि आफ्नो बटमलाइनको सुइले पुरा फन्को लगाउनुले उसको असली राष्ट्रवाद प्रारुप उदाङ्ग गरेको कुरा सायद राष्ट्रवादी पार्टी र पार्टीका ढोगी कार्यकर्ताले स्वीकार्न गर्न नसक्लान् त्यो फरक कुरा हो तर आम नेपाली जनताले स्वीकार गर्छन् ।
एमाले र एमालेका नेतामा अलिकती पनि नैतिकता छ भने कुन नैतिकताले संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्छन् ? के आधारले संविधान संशोधनमा सहमति हुन्छन् ? यो भित्रका खेलहरु अनेकौं हुन सक्छन् । आज आएर संविधान संशोधन स्वीकार गर्नु रै’छ त करिब २ महिनासम्म यो तान्डव नृत्य किन देखाएको संसद र सडकमा ? उसले देखाएको नाटक मंचनले देशलाई कति बर्बाद् पार्यो । त्यसको क्षतिपुर्ती तिर्ने कि नतिर्ने ?
संविधान संशोधनमा तयार हुँदै गर्दा यहि संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रघाती, दलाल, भारतीय लम्पसारवादीको आरोप खेपेका प्रचण्डमाथि भएको अपमानको क्षतिपुर्ती एमालेले तिर्न सक्ने कि नसक्ने ?बिखन्डनकारी भनेर लगाइएको आरोपलाई कसरी पुष्टि गर्ने ? अनि आमजनतालाई उक्साएर आन्दोलन गर्दा जलाइएका गाडीहरु ढलाइएका पुष्पलालका शालिकहरुको क्षतिपुर्ती तिर्ने कि नतिर्ने ? आखिर भ्रमको खेती कति दिनसम्म गर्ने जनता कतिन्जेल झुक्याउने ? रामायणको गाता हालेर निलो कथा बेच्ने प्रवृति कहिलेसम्म जारी राख्ने ? आखिर यहि प्रवृतिले होइन सिके राउत प्रवृतिको जन्म भएको ? सिके राउत प्रवृतिले जन्म हुनुमा सबै दोषी होलान् तर मुख्य भुमिका तिनैको छ । जसले अहंकारवादी प्रवृति देखाएका छन् । हिजोसम्म यो संशोधनले देश टुक्र्याउँछ भन्दै जनतालाई भ्रम फैलाउनेहरु आज एकाएक संशोधनको लागि तयार हुनुले उनीहरु नै देश बिखन्डनतर्फ छन् भन्ने बुझ्न सकिन्न र ? देश बिखन्डन गर्ने संशोधनमा लचक हुनुले उसको राष्ट्रवाद उदाङ्ग भएको छैन र ? आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने स्थिति आए सबै राष्ट्रवादी अनि आफू प्रतिकुल भए सबै राष्ट्रघाती प्रवृति देशका लागि सबैभन्दा घातक छ । त्यसैले आम जनताहरु एमालेको राष्ट्रवाद र सुनको जलप लगाइएको पित्तल एकै हुन भ्रममा नपरौं । मौसमी राष्ट्रवादको पछि नलागौं ।
नवराज सिंखडा 'जिज्ञासु'close